बलिउड स्टारका चर्चित ५ झगडा | Neptoday
बलिउड स्टारका चर्चित ५ झगडा
हालै बलिउड निर्देशक करण जोहरले आफ्नो आत्मकथा सार्वजनिक गरे। सो किताबमा उनले कुनै समयकी अति घनिष्ट मित्र काजोल र उनका अभिनेता पति अजय देवगनसँगको झगडासँगै कयौन कुरा उल्लेख गरेका छन्। घनिष्ट सम्बन्ध एकाएक दुश्मनीमा बदलिएको घटना उनीहरूको मात्र होइन। बलिउड नगरीमा अन्य यस्तै झगडाहरू अरू छन् जसको कहिल्यै कुनै समाधान निस्किएन। बलिउड स्टारहरूका हालसम्म नसुल्झिएका पाँच झगडा यस्ता छन्:
१. आमिर खान-रेखा: आमिरका बाबु ताहिर हुसौन आफ्नो जमानाका चर्चित फिल्म निर्माता थिए। उनले ८० को दशकमा एउटा फिल्म सुरू गरेका थिए, ‘लकेट’। फिल्ममा रेखा मुख्य भूमिकामा थिइन। रेखाले यस फिल्म गर्दा ताका थुप्रै पटक सुटिङ स्थगितका साथमा समयको बेवास्था गरिन्। फिल्मको थुप्रै पटक पुन:छायाँकन गरियो। बल्लतल्ल फिल्म पूरा भयो। आमिरले यस घटनालाई एकदम नजिकबाट नियालेका थिए। बलिउडमा आफू स्थापित भइसक्दासमेत कहिल्यै उनले यसबारेमा प्रतिक्रिया जनाउने काम गरेनन् तर यसका साथमा उनले रेखासँग कहिल्यै काम पनि गरेनन्। उनले यस्तो नगर्नुमा रेखाले स्टार हुँदा ताका फिल्मका दौरान दिएको हैरानीको परिणामका रूपमा हेरिदै आइएको छ।
२. शाहरूख खान-अजय देवगन: उनीहरूको विवाद ‘जब तक है जान’ तथा ‘सन अफ सरदार’को समयभन्दा धेरै पहिलादेखिको हो। घटना राकेश रोशनको ‘करण अर्जुन’ फिल्मको हो। अजय फिल्ममा शाहरुखले गर्न लागेको भूमिका चाहन्थे। त्यतिबेला सो फिल्मको नाम ‘कायनात’ थियो। दुई जनाले फिल्मका निर्देशक राकेश रोशनसँग यस बारे कुरा गरे। राकेश यसमा तयार भएनन्। यसैबिच फिल्ममा सलमानको प्रवेश भयो। शाहरूखले अजयलाई यो नयाँ मोडको बारेमा बताएका थिएनन्। यो घटनाबाट अजयले आफूमाथि भएको धोकाका रूपमा बुझे। यो कुरा अजयको मनमा काँडा बनेर बस्यो। सोही समयदेखि उनीहरूको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण रहँदै आयो। भलै अजयकी पत्नी काजोल शाहरुखकी नजिककी मित्रमा पर्छिन्।
३. राकेश रोशन-अनुराग कश्यप: २००६ मा कृष फिल्म रिलिज भएको थियो। सो समयमा अनुराग कश्यप बिनाकारण राकेश रोशनसँग भिड्न पुगे। सुभाष घईको अभिनय स्कूलमा अनुरागलाई अतिथि शिक्षकका रूपमा निम्त्याइएको थियो। उनले त्यहाँ फिल्मको सफलताका बारेमा विद्यार्थीसँग अन्तरक्रिया गरे। त्यहाँ उनले कृषको चर्को आलोचना गरे। फिल्मलाई नराम्रो भने। कश्यपको यो कुराले घई एवम् रोशनका साथमा उद्योगका थुप्रै मानिस उनीसँग रूष्ट भए।
४. सन्नी देवल-आदित्य चोपडा: सन्नी र निर्देशक आदित्यकाबिच ‘डर’ फिल्मताका भएको झगडा आजपर्यन्त जारी छ। ‘डर’ फिल्ममा काम गर्न सन्नी राजी भए। आदित्यले सन्नीलाई फिल्म गर्नका लागि जे वचन दिएका थिए, त्यो उनले पूरा गरेनन्। सन्नीलाई फिल्ममा आफ्नो भूमिका कमजोर पारिएको लाग्यो। फिल्मपछि उनीहरूको एकअर्कासँग बोलचाल बन्द भयो जून आज पनि जारी छ। यस पश्चात सन्नी यसराजका फिल्ममा कहिल्यै अटाएनन् जबकी दुबैजनाको जुहुस्थित घर आमुन्ने-सामुन्ने छ।
५. अजय देवगन-करन जोहर: करन जोहर र अजयको झगडा ‘कुछ कुछ होता है’ फिल्मबाट सुरू भएको हो। सोही समयमा फिल्मका कलाकारहरू शाहरूख खान, रानी मुखर्जी तथा काजोललाई लिएर करनले कोकको विज्ञापन बनाए। त्यो बेला करनले अजयसँग राम्रो व्यवहार गरेनन्। शाहरूखसँग करण-जोहर फिल्मको असन्तुष्टि त थियो नै। यसमा काजोलसँग अजयको बढ्दो निकटताले पनि यसमा मूलरूपले प्रभाव पार्यो।